Ikhaya elidala kwiziko lembali laseHamburg - I-Airbnb
Ikhaya elidala kwiziko lembali laseHamburg
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguNataliya
Siyintsapho encinci, umama, nonyana waseFransi. Sihlala kwisakhiwo esidala embindini wedolophu. Sikhangele phambili ekuboneni iindwendwe ezivela emhlabeni wonke. Sithetha isiJamani, isiNgesi nesiRashiya. Sicela igumbi kwiflethi yethu, elanele undwendwe olunye okanye intsapho encinci. Kwiindwendwe ezinabantwana sinokulungiselela ikhothi. Sicela iindwendwe ukuba zingalisebenzisi ikhitshi lethu, kodwa yonke into enokufumaneka ekhitshini iza kuba yeyakho.
Basebenzisa igumbi kwiflethi, kunye nefriji yabo, iketile kunye nomatshini wokwenza ikofu. Igumbi lokuhlambela lisetyenziswa sithi (umatshini wokuhlamba, owokomisa iinwele, iayini). Ekhitshini unokuqesha zonke iintlobo zezitya nanini na. Sicela iindwendwe zethu ukuba zingalisebenzisi ikhitshi ngokubanzi, kodwa ungaya kulo nanini na ukuba kukho into oyifunayo. Kwiindwendwe ezinabantwana, le mithetho kufuneka itshintshwe ngoko nangoko, ungamphekela umntwana, okanye uzenzele ngokwakho.
4.76 · Izimvo eziyi-272
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi272
Sihlala embindini wedolophu. Unokufikelela phantse kuzo zonke iindawo ezibalulekileyo uhamba ngeenyawo, njenge-Michaeliskirche, i-Rathhausmarkt kunye ne-Alster. Iivenkile ezinkulu kunye neevenkile zesebe zingafikelelwa ngokukhawuleza, kunye neevenkile ezinkulu (iidecafilialen ezimbini, iRewe, iRewe). Ngaphantsi kumgangatho osezantsi yindawo edumileyo yaseHamburg: Ivenkile Yokutyela Kawonke-wonke. Iivenkile ezincinci ezininzi ezikufutshane: iSchanzngeräkerei, iDatbackhus, iJoe neJuice, iSuite Suite. Eyona pizza imnandi edolophini ikufutshane nesitrato ukusuka eTrattoria. Isikhululo esingaphantsi komhlaba esikufutshane: Stadthausbrücke. Ukuba unendawo ethile oya kuyo esixekweni, ndingakuqhuba (ngokudibana).
Ungandifowunela nanini na ngefowuni okanye ngeUpUp. Sisoloko silapha ukuze uphendule imibuzo yakho kodwa uhloniphe indawo yakho yabucala.
Inombolo yomthetho: 12-0012125-19